Ime Ahu maka Outsourcing Email Marketing Services
Maka ndị na-ere ahịa chọrọ ịmịkwuo ọlaedo site na mmemme email ha; ahia ahia email na-ewu ewu ngwa ngwa.
Ijikwa ozi email nwere ike ịme ọtụtụ ụdị, dị ka nka na njikwa nke nkwukọrịta ozi email na-agagharị.
Ọ nwekwara ike ịgụnye mmepe ọdịnaya, nkesa obe, kesaa ndepụta, yana njikọta teknụzụ a na-enweghị atụ na usoro ịkọ akụkọ. Ndepụta ahụ dị ogologo.
N'ọnọdụ ọ bụla, mgbe ndị ahịa anyị bịakwutere anyị na-arịọ jikwaa ọrụ email ọ bụ n'ụzọ dị ukwuu n'ihi na ha bụ obi mgbawa na frugal.
Ndị nkụda mmụọ nwere nkụda mmụọ
Ike gwụrụ ha. Ha enweghị ike ịchọta tozuru etozu ụlọ ma ọ bụ siphon mgbakwunye nrụpụta (ma ọ bụ ikike) sitere na ndị ọrụ ha dị, mana ha ma na ha nwere ike mekwa ọtụtụ ihe.
Nke ahụ bụ ihe a na-ahụkarị. N'ọtụtụ ụzọ email ahịa bụ ọzụzụ pụrụ iche. Email siri ike. Mana n'uzo ndi ozo ochoro ikike na mkpebi siri ike. O siri ike ịchọta ihe ndị a chọrọ n'otu ebe ma ọ bụ otu ndị ọrụ karịrị ọrụ na ndị a zụrụ azụ.
Outsourcing na-arụ ọrụ n'ihi na ọ na-enye ndị ahịa ohere ịbanye n'ọtụtụ, ma ọkachamara, nkà nke onye ha na ha ga - abụ ụlọ ọrụ na - ere ahịa email ma ọ bụ ESP.
E wezụga ihe okike, nkà na ụzụ, na ike nke ikwenye (ihe niile achọrọ ma ọ bụrụ na ị ga-emeri egwuregwu email), onye na-azụ ahịa email na-ewetara ha ahụmịhe nke ịrụ ọrụ na ndị ahịa dị iche iche. Nke a bụ ebe enweghị njedebe maka echiche ọhụụ nke na-eme ka mbọ niile ahụ ghara ịba na "otu ndị na-eche" yana na dollar ọ bụla e mefuru ga-abawanye.
Mgbe ị na-ekpebi ịpụ ahịa ahịa email ha ma ọ bụ debe ya n'ụlọ, ọtụtụ n'ime ndị ahịa anyị lere anya na mbụ ma ọ bụrụ na ọ nwere ezi uche. Ha anaghị eche echiche.
Ka anyị chee ya ihu, ọrụ ịre ahịa email na-ewe oge. Yabụ, n'otu ụdị ma ọ bụ ọzọ, oge bụ isi iyi nke ahịa.
Nke ahụ bụ otu n'ime ihe ndị mere outsourcing na-eme ka uche; ọ na-ewe obere oge.
N'ihi ahụmịhe nke onye ọrụ email gị na-eweta na tebụl, enwere obere mmụta na-enweghị mmụta, ebe ọ bụ na ọ gbasara ike ha. Ha na-echekwa na ọ dị ha mkpa igosipụta uru ha bara, kwa ọnwa.
Enweghị m ike ikwu maka ụlọ ọrụ niile mana anyị ejirila ọnwa ole na ole were ihu anyị lie na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ interface ESP na API. Anyị maara ike ha, adịghị ike ha, na erughị eru ha. Anyị emeela ọtụtụ puku mkpọsa ma nye ọrụ nyocha ọtụtụ ọtụtụ ndị ahịa B2C na B2B. Nke a na - emepụta arụmọrụ nke a na - enweta naanị site na ahụmịhe. Meansrụ ọrụ pụtara obere oge, nke pụtara obere ego.
E wezụga arụmọrụ, agụmakwụkwọ na-aga n'ihu na-efu ndị na-eweta ọrụ. Ego ịkwụ ụgwọ, ahụike, oge ezumike? Fugetaboutit.
Ọnụ ego a na-akwụkarị obere karịa nke onye ọrụ oge niile, ma ọ bụ dabere na ihe ndị a chọrọ, enwere ike ịchọta nchekwa ego ka ukwuu. Ọzọkwa, ya niile na-akwado oge.
Ọ bụrụ na ha na-apụ apụ, ụdị ROI ndị ahịa ahụ nwere ike ịtụ anya ya? Enwere otu ụzọ iji chọpụta: malite ntughari ma jiri amamihe họrọ. Ọ nwere ike ịkwụ nnukwu ụgwọ iji chọta onye gị na ya ga - arụkọ ọrụ ọnụ ma soro ha ma ọ bụ ndị otu n’ime ha rụọ ọrụ, ma ọ bụ ma eleghị anya ha ga - achọ ịchụpụ mbọ niile ị na-agba n’ahịa email, ofe na akụ.
Tags: email Marketingalaoutsourcing
Ezigbo ozi, Scott. Lelee post a maka ụfọdụ ihe ndị ọzọ mere email ị na-apụ apụ ji ezi uche: http://lunchpail.knotice.com/2010/05/28/why-outsourcing-email-makes-sense/